Ajọ Ifufe Dorian: njirimara, ihe na-akpata na nsogbu | Netwọk Mgbasa Ozi
Ajọ Ifufe Dorian
Anyị maara na mgbanwe ihu igwe na-abawanye ụba na oke ike nke ihe ikuku ihu igwe dị iche. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka ya Ajọ Ifufe Dorian. O mere na Septemba 2019 ma edepụtara ya dị ka edemede 5. Ọkwa otu a bụ nke kachasị. O butere ọdachi jọgburu onwe ya ma kuziere anyị mmụọ maka mgbanwe ihu igwe iji mepụta ụdị ihe omume ihu igwe dịkarịsịrị njọ.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Hurricane Dorian, njirimara ya na nsonaazụ ya.
2 Track nke Ajọ Ifufe Dorian
3 Ọrụ ndị ajọ ifufe Dorian metụtara
4 Ajọ Ifufe
Saffir-Simpson n'ọtụtụ bụ sistemụ ntụle ifufe. E kewara ya na edemede 5, nke na-eburu n'uche ọsọ ikuku na ọrụ cyclonic mgbe ajọ ifufe fechara, ma lebara ịrịgo anya na ebili mmiri n'oké osimiri mgbe oke ifufe gasịrị. Ajọ ifufe Dorian ruru ụdị 5, nke kachasị ukwuu ma dị egwuỌ bụ ezie na ọ dị obere oge ọ ruru Bahamas, na-ebute nnukwu mmerụ ahụ ma ọ dịkarịa ala ọnwụ ise.
Ka anyị lee ihe ikuku ikuku na-adabere na otu:
Nkeji 1: Ifufe dị n’agbata 118 na 153 KM / awa
Nkeji 2: Ifufe n’agbata 154 na 177 KM / awa
Nkeji 3: Ifufe dị n’agbata 178 na 209 KM / awa
Nkeji 4: Ifufe dị n’agbata 210 na 249 KM / awa
Nkeji 5: Ifufe karịrị 249 KM / awa
Track nke Ajọ Ifufe Dorian
Mgbe achọpụtara Ajọ Ifufe Dorian, National Hurricane Center tụrụ ya n'anya na "ejighị n'aka na amụma nke ụzọ" nke ajọ ifufe ahụ. Hurlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ajọ Ifufe nke Mba chere na ọ bụ n'ihi usoro dịgasị iche iche nke ịme ngosipụta, ntụkwasị obi nke amụma siri ike ka dị ala. Okwesiri ighota na oke ikuku ndi ozo dika Dorian na-esikarị ike ikwu.
Dorian nwere oge nke ngwa agha na ike mgbapụta, tumadi n'ihi na uzuzu si na Sahara rute Oké Osimiri Caribbean ma belata mmepe ya. Ọbụna ihe ịtụnanya a na-eme ka dayameta nke oke ikuku gbapụta n'etiti kilomita 35 na 75 kilomita. Site na akụkụ nke mbụ, ụzọ a na-egosi na ọ gafere Puerto Rico na ugwu ugwu ọwụwa anyanwụ nke Dominican Republic. Ọbụna ụfọdụ buru amụma na ọ nwere ike iru n'ebe ugwu nke Cuba. Ma ọ tụrụ ya n’anya ọzọ, hapụ naanị mmiri ozuzo ole na ole na Puerto Rico. N'ikpeazụ, ọ gawara isi ugwu ọdịda anyanwụ wee ruo Bahamas na Florida na United States.
Panorama nke Dorian hapụrụ na agwaetiti Bahamas adịchaghị mma. Ọ dịkarịa ala mmadụ 5 nwụrụ na ihe karịrị iri abụọ merụrụ ahụ. Dabere na akụkọ sitere n'aka International Red Cross, nke e nyere na Mọnde, Septemba 20, 2, ihe karịrị ụlọ 2019 puku mebiri emebi ma bibie ọtụtụ kpọmkwem. Ọzọkwa, idei mmiri ahụ mere ka Abaco Islands, otu ìgwè nke cays na northwest nke Bahamas. Ejiri mmiri nnu mee ka olulu mmiri ndị na-arinụ mmiri metọọ.
Ọrụ ndị ajọ ifufe Dorian metụtara
Na United States, ebe oke ifufe ahụ fefere metụtara ihe karịrị ụgbọ elu 600. N'ihi ọbịbịa nke ajọ ifufe ahụ, ọdụ ụgbọelu dị na Orlando, Daytona Beach, Fernandina Beach, Jacksonville na Pompano Beach ga-emechi ruo Wednesday. Na mgbakwunye, ọdụ ụgbọ mmiri Florida kwụsịkwara inye ọrụ na ụgbọ oloko kwụsịkwara. Na Georgia, South Carolina, na North Carolina, ndị nile bi n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke I-95 ka a kpọpụrụ n'ihi oke ide mmiri.
Ajọ ifufe ahụ dị na Bahamas ruo awa 18. Ọ bụ ezigbo nro. Ọ bụ ezie na a na-atụ anya ka ọ kwụsịlata na ọbụlagodi ịkwụsị, mmadụ ole na ole tụrụ anya na nkwụsị ya na Bahamas ga-adịgide ogologo oge.
Site n'ehihie Mọnde, Dorian nọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ebe ruo ụtụtụ na Tuesday, mgbe ọ malitere ịkwaga n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ na ọsọ nke mbe: 2 km / h nke mechara ruo 7 km / h.
Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo na e nwere ọgba aghara na-abịa site na mgbanwe ihu igwe. O nwere ike ịbụ na ajọ ifufe ndị na-ekpo ọkụ na-akwụsịkarị n'akụkụ ụsọ mmiri wee jiri ọtụtụ awa gafee mpaghara ndị a. O doro anya na nke a bụ ihe na-agbawa obi, ebe ọ bụ na a ga-ahụ mmetụta na-adịghị mma na obodo ruo ogologo oge. Dị ka ọmụmụ, nkezi ọsọ nke ajọ ifufe belatara 17%, n’etiti 15,4 km / h na 18,5 km / h.
Ihe kpatara na ajọ ifufe ahụ kwụsịrị na mpaghara ụfọdụ pụtara na mmebi na mpaghara ahụ ga-abawanye ụba. Nke a bụ n'ihi na ikuku na mmiri ozuzo na-emetụta mpaghara ruo ogologo oge. Iji maa atụ, Harvey wụsara ihe karịrị milimita 1.500 mmiri ozuzo na Houston mgbe ọ nọrọ ebe ahụ ọtụtụ ụbọchị. Ajọ ifufe Dorian jiri oke mmiri dị iri abụọ na abụọ wee zoo Bahamas ihe karịrị awa 48.
Dika ihe omumu si kwuo, na onu ogugu onu ogugu gara aga, oke ikuku obula nke kwusi ma obu wetuo obi ya nwere ihe puru iche. Ihe kpatara ya metụtara ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ọdịda nke nnukwu usoro ikuku. Otú ọ dị, Ọnọdụ a kwenyere na ọ bụ n'ihi ndalata izugbe nke mgbasa ikuku (ikuku zuru ụwa ọnụ), na-akpụ ifufe na ebe okpomọkụ ma na-agagharị na okporo osisi ndị dị na etiti latitude.
Ajọ ifufe anaghị ebugharị onwe ha: ọ na-eme ka ebili mmiri na-ebugharị ya, nke ndị na-eme ka ikuku na-emetụta ya.
Ọ bụ ndị ọkachamara ole na ole na-enwe mmetụta mmetụta okpomoku zuru ụwa ọnụ na ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ. Philip Klotzbach, dibia ihu igwe na Colorado State University dị na United States, kwuru na enweghị ihe akaebe na mgbanwe ihu igwe na-ewepụtakwa oke ifufe, mana enwere ihe na-egosi na mgbanwe ihu igwe na-eke ọnọdụ maka ha ka ha bụrụ mbibi. Ọmụmaatụ, Dorian bụ oke ifufe nke ise nke 5 mepụtara na Atlantic n'ime naanị afọ anọ, ihe ndekọ a na-enwetụbeghị ụdị ya. Igwe dị jụụ nwere ike ijigide mmiri karịa ya wee weta mmiri ozuzo. Ọzọkwa, ka ebili mmiri na-ebili, ebili mmiri na-abanyekwu n'ime ime, ebe oke osimiri dị elu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Hurricane Dorian na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ajọ Ifufe Dorian
Köppen ihu igwe nhazi ọkwa